Huawei User များအတွက် သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးများ - နည်းပညာချစ်သူ
Huawei User များအတွက် သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးများ
(❶)ဖုန်းထဲမှာတင် Firmware တင်နည်း သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
1-ကတော့ SD ကတ်ထဲ dload ကိုထည့်
P-Key+V Up+V Down ကို တွဲပြီးတင်ရပါတယ်။
2-About Phone /System Update/Local Update ဆိုပြီး
နောက်ပိုင်း Huawei ဖုန်းတွေမှာတော့ Updater ဆိုပြီးသက်သက်ပါလာတယ်ဗျ အဲ့ကနေတင်လို့ရပါတယ်။
3-ကတော့ တစ်မျိုး ဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာမှာ *#*#2846579#*#* ကိုနှိပ်။Software Upgrade/SD Card Upgrade ကနေတင်ပေးရမယ်။
(နည်3းမျိုးအတွက်လိုအပ်ချက်ကတော့ SD ကတ်ထဲမှာ dload ဖိုင်ထည့်ထားပေးရပါမယ်။Huawei ဖုန်းတိုင်း dload နဲ့လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး)
(❷)သင့်ဖုန်းထဲမှာ SuperSU ဆိုတဲ့ apk လေးရှိနေရင် SuperSU apk ကိုနှိပ်ပြီးဝင်စရာမလိုပါဘူး။
ဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာမှာ *#*#1234#*#* ကိုရိုက်ပြီး ခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။SuperSu ကဖျောက်ထားလို့ရပါတယ် SuperSU/Settings/Launcher Icon မှာဖျောက်ထားပေးပါ။ပြန်ခေါ်ယူလိုတဲ့အခါမှာ အပေါ်ကပြောသလိုပေါ့။
(❸) Huawei ဖုန်း Version 4.0 နဲ့အထက်တွေမှာ Screen Shot ရိုက်လို့ရပါတယ်။အောက်ပိုင်းတွေကတော့ Support မလုပ်ပါဘူး။V-Down+Power ခလုတ်ကိုတွဲ နှိပ်ပေးပါ။နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာတော့မလိုတော့ပါဘူး။Screen Shot အပြင် Screen Recoding ပါထည့်သွင်းပေးလာပါတယ်။Screen Shot ရိုက်နည်းကလည်းတစ်မျိုးတည်းရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
(❹)သင့်ဖုန်းကို Computer နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ရင်တော့ Developer Opations ကိုဖွင့်ကိုဖွင့်ရပါမယ်။အဲ့ထဲကနေပြီးမှ USB debugging ကိုအမှတ်တပ်ပေးလိုက်ပါ။Developer Opation မပေါ်တဲ့ဖုန်းတွေကတော့ Settings/About Phone/Build number ကို 7ချက်လောက်ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးပါ။ဒါလေးကတော့လူတော်တော်များများသိပါတယ်။
(❺)Blackground မှာ Apk တွေ Run နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းကအလွန်လေးလာပါလိမ့်မယ်။Home ဒါမှမဟုတ် Menu ခလုတ်ကို ခပ်ကြာကြာလေးဖိထားပေး အမှိုက်ပုံးလေး ဒါမှမဟုတ် တံမြက်စည်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။Model အလိုက်ကွာခြားချက်လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။အခြားနည်းလေးတွေလည်းရှိသေးပါတယ်။
(❻)ဖုန်းတလုံးကိုအကောင်းဆုံးကုသနည်းရှိပါတယ်။ရိုးရှင်းလွယ်ကူတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်း Restart Or Reboot လုပ်ပေးပါ။ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့နည်းဖြစ်သလို သင့်ဖုန်းလေးဟာအမြဲပေါ့ပါးနေမှာပါ။လူတော်တော်များများကဟို apk ကဖွင့်မရတော့ဘူး စက်ကြီးတအားလေးလာပြီဆိုပြီး ဆိုင်ကိုပိုက်ဆံသွားပေးဖို့ပဲစိတ်ကူးနေပါတယ်။
(7)Date and Time ပြန်ချိန်တဲ့အခါ အကွက်လေးတွေမှေးမှိန်ပြီးချိန်မရဖြစ်နေပါလား။Airplane Mode ကိုအမှတ်တပ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ချိန်နိုင်ပါတယ်။
(8)ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Ringtone လေးတွေကို Settings/Sound/Phone Ringtones ထဲမှာပေါ်စေချင်ရင်တော့ SD ကတ်ထဲသွား New Floder ကိုနှိပ် Ringtones များလို့အမည်ပေးပြီး ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ mp3;Ringtones လေးတွေကိုထည့်ပေးထားလိုက်ပါ။(mp4 တွေကိုအသံပဲကြားချင်ရင် Rename ကို m4a လို့ပြောင်းပေး)
နည်းပညာက သင့်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်အောင် ကူညီနိုင်မှာလား
Facebookမှာရှိတဲ့ Videosတွေကို ကြည်လင်စွာ ဒေါင်းလုတ်နည်း။
သင်သိသင့်တဲ့ USB ကြိုးများ အကြောင်း။
သင့်ဖုန်းမှာ ဒီAppကိုဖျက်ထုတ်လိုက်ရင် ဖုန်းဘက်ထရီ၂၀%ပိုခံလိမ့်မယ်။
❝သင့်ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်နဲ့ ပတ်သက်သမျှကို တစ်နေရာတည်းမှာ စီမံထိန်းချုပ်ဖို့ကိရိယာ❞
ဖုန်း အတု အစစ် ခွဲခြားနည်း။ (Rootမလို)
NASA က အသံထက်မြန်တဲ့ လေယာဉ်ပျံတွေကို တီထွင်နိုင်ပြီးဆိုတာ သင်သိပါသလား။
အကြီးစားဘက်ထရီ 4000 mAh အသုံးပြုမယ့် Huawei P20 Plus ဖုန်းအသစ်။
ထိတ်လန့်စရာ အရမ်းကောင်းပြီး လူကြိုက်အရမ်းများတဲ့ Temple Run2ဂိမ်း ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပြီး။
Application Computer Tech Facebook Tech Gadgets Games How To Internet Tech Knowledge local News News Phone Tech Photography Review Science Sponsored
သင့် Android ဖုန်းထဲကနေ အခုချက်ချင်း ဖယ်ထုတ်ပစ်သင့်တဲ့ App (၅)မျိုး
လေချွန်လိုက်တာနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်အောင် လုပ်နည်း
RAM 8GB နဲ့ ထွက်ရှိလာမယ့် Mi7ဖုန်းရဲ့ Specifications တွေ ထွက်ပေါ်လာ
မြန်မာ သီးချင်းတွေကို ဒေါင်းလုတ်နည်း။
မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် သိထားဖို့ ဖုန်းမဝယ်ခင် တစ်ခါလောက်ဖတ်သွားပါ။
Mi ကိုဝယ်တော့မှာလား ? ဝယ်လာလို့ စသုံးဖြစ်ပြီလား ? ဝယ်မယ့်သူကိုပြန်ရှင်းပြဖို့လား ?
ညနက်တဲ့အထိ ဖုန်းသုံးရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဖတ်ကြည့်ပါ (တကယ်ကြောက်စရာမို့ သတိထားသင့်ပါတယ်)
ဖေ့ဘုတ်မှာ ကိုယ့် Profile ကိုယ် Wall ကို ဘယ်သူတွေ ဝင်ကြည့်သလဲ.. ဘယ်အချိန်က ၀င်ကြည့်သလဲ.
Copyright © 2018 နည်းပညာချစ်သူ | All Rights Reserved. Developed by Boykhai.